Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » Khubarada ugu sareysa sonkorowga iyo shirkadda AI oo ku sii jeeda Guam
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Guam • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hoggaamiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee Guam waxay ku biiraan xoogagga khubaro caafimaad oo tikniyoolajiyadda sare ee sonkorowga ah si ay Guam uga sameeyaan cilmi-baaris ay wadeen Sirdoonka Macmalku.
Daraasadda la qorsheeyey waxay diiradda saari doontaa isku -darka xogta daryeelka caafimaadka ee ilo kala duwan iyo adeegsiga AI si loo garto qodobbada halista ah ee muhiimka ah iyo bixinta aragtiyada daaweynta bukaannada qaba sonkorowga.
Caafimaadka AI wuxuu ku takhasusay adeegsiga AI iyo IoT si uu u bixiyo xalal daryeel caafimaad oo fudud oo ka shaqeeya adduunka dhabta ah maanta, qiimo wax ku ool ah, hab waafaqsan asturnaanta.
Waxaa hormuudka u noqon doona daraasadda qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ee adduunka ugu sarreeya ee sonkorowga, daryeelka caafimaadka iyo teknolojiyadda - gaar ahaan agagaarka sirdoonka macmalka ah iyo teknolojiyada la gashado.
Xarunta Caafimaadka Gobolka Guam (GRMC), Xarunta Caafimaadka Mareykanka (AMC), iyo Calvo's SelectCare ayaa maanta ku dhawaaqay inay ku biireen xoogagga AI Health si ay u bilaabaan iskaashi cilmi baaris ah si ay cilmi -baaris caafimaad ugu keenaan sirdoonka macmalka ah (AI). Daraasadda la qorsheeyey waxay diiradda saari doontaa isku -darka xogta daryeelka caafimaadka ee laga helo ilo kala duwan iyo adeegsiga AI si loo garto qodobbada halista ah ee muhiimka ah iyo bixinta aragtiyada daaweynta bukaannada qaba sonkorowga.
Waxaa hormuudka u noqon doona daraasadda qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ee adduunka ugu sarreeya ee sonkorowga, daryeelka caafimaadka iyo teknolojiyadda - gaar ahaan agagaarka sirdoonka macmalka ah iyo teknolojiyada la gashado. The Caafimaadka AI Guddiga La -talinta waxaa ka mid ah David C. Klonoff, MD (hormuudka Teknolojiyadda Sonkorowga); iyo Francisco J. Pasquel, MD (khabiir ku ah wanaajinta daryeelka leh Teknolojiyadda Sonkorowga).
Sonkorowgu wuxuu sii ahaanayaa dhibaato caafimaad oo weyn oo si aan xad lahayn u saamaysa shakhsiyaadka Aasiya, Dhaladka Hawaii, iyo Jasiiradaha Baasifigga. Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambaysay ee CDC baahsanaanta sonkorowga Guam way ka sarraysaa inta badan gobollada Mareykanka, iyo dadka waaweyn ee dhaxalka Chamorro waa 18.9% - ku dhawaad ​​lixdiiba hal.
Guam waa meel ku habboon in lagu barto sonkorowga iyadoo la adeegsanayo AI. "Guam wuxuu si gaar ah u taagan yahay inuu abuuro saameyn macno leh oo ku xeeran daraasadda adduunka oo dhan, iyo tan ugu muhiimsan, noo oggolow inaan ka tagno dhaxal wanaagsan oo saameyn ku yeelan kara bulshada kuwa qaba cudurka macaanka," ayuu yiri Dr. Klonoff. “Guam kaliya maahan inuu na siinayo muunad wakiil oo aad u weyn oo loogu talagalay daraasaddeena, laakiin wuxuu kaloo na siiyaa kala duwanaansho qowmiyadeed, joogitaanka cudurrada dabadheeraad ah, iyo bulsho caafimaad oo casri ah. Jasiiraddu sidoo kale way yar tahay si aan u samayn karno daraasad la kontoroolay oo hufan, halkaas oo aan awoodno inaan si toos ah uga qaybgalno qaar badan oo ka mid ah daneeyayaasha muhiimka ah ee nidaamka deegaanka daryeelka caafimaadka. ”
Iyadoo lala kaashanayo isbitaallada, bixiyeyaasha caymiska, bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah, bukaannada, iyo shaybaarrada Guam, shirkadda farsamada Caafimaadka AI waxay u egtahay inay isu keento macluumaad muhiim ah oo ka imanaya dhammaan ilahaas iyada oo loo marayo madalkeeda sirdoonka macmalka ah. Marka la isu geeyo, kooxdu waxay adeegsan doontaa dhowr farsamood oo AI ah si loo kala saaro bukaannada, loo saadaaliyo horumarka cudurka, loona ogaado fursadaha shaqsiyeed ee faragelinta hore si loo hagaajiyo natiijooyinka bukaanka.
Xarunta Caafimaadka Gobolka Guam waxay u adeegi doontaa Guddiga Dib -u -eegista Gudaha ee Daraasadda. "GRMC waxay ku faraxsan tahay inay gacan ka geysato iskaashigan cilmi -baarista xiisaha leh oo aan rajeyneyno inay u horseedi karto waaga cusub ee daryeelka dadka la nool sonkorowga, kaliya maahan Guam laakiin adduunka oo dhan," ayuu yiri Madaxa Caafimaadka GRMC Dr. Alexander Wielaard.
Wasiirka Dalxiiska Seychelles oo Baaq u diray DMC -yada